Funda ngeeNyuvesi eziLungele iNtshona Koloni kwilizwe
Ezi zikolo zikarhulumente eziphezulu zikarhulumente ezixhaswa ngemali zikarhulumente ezineendawo ezifanelekileyo, i-faculty eyaziwayo emhlabeni, kunye nokuqaphela igama elinamandla. Ngamnye umele ixabiso elikhulu, ngakumbi kubafundi belizwe. Ndiye ndabhala izikolo ze-alfabhethi kunokuba ndizame ukwenza ulwahlulo lwangaphandle phakathi kweeyunivesithi ezigqwesileyo.
Kukho izizathu ezininzi zokuba ungathatyathwa kwiiyunivesithi ezifakwe apha. Uninzi lukhulu ngamaziko ophando owenziwe ngeekholeji ezininzi kunye nezikolo. Amathuba okufunda asetyenziswa ngokugqithiseleyo ngaphezu kwee-100. Kwakhona, uninzi lwezikolo nazo zininzi zomoya wesikolo kunye nokhuphiswano lweCandelo le-NCAA Iiprogram zezemidlalo.
Gcina ukhumbule ukuba ezi zikoyunivesithi zikhethiweyo, kwaye abafundi abaninzi banokufumana iincwadi zokulahlwa ngaphandle kweemvume. Ukuba uthelekisa umlinganiselo we- SAT kunye ne- ACT yemaphu yeempawu zezikolo , uya kubona ukuba unokufuna iimvavanyo eziphezulu ngaphezu komyinge.
Ngaba Uya Kufika? Ngesixhobo samahhala esivela eKappex, unako ukubala amathuba akho okufumana ezi ziko zikarhulumente eziphezulu.
IYunivesithi yeBinghamton (SUNY)
KwiYunivesithi yaseBinghamton. Greynol1 / Wikimedia Commons
IYunivesithi yeBinghamton, inxalenye yeYunivesithi kaRhulumente yaseNew York (i-SUNY), ngokuqhelekileyo ikwahlula kwiiyunivesithi eziphezulu kakhulu ezikuMntla-mpuma. Ngenxa yamandla alo kwezobugcisa kunye neenzululwazi, iYunivesithi yaseBinghamton yanikezelwa isahluko sePhimelelo yePhimelelo ye-Phi Beta Kappa. I-84% yabafundi bevela kwi-25% ephezulu yeklasi yabo ephakamileyo. Kwi-front yezemidlalo, iyunivesiti iyancintisana kwiCandelo le-NCAA i-I-East-East Conference
Ubhaliso: 17,292 (13,632 abafundele iidanga)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayli yaseYunivesithi yaseBinghamton
Tilman Hall kwiYunivesithi yaseClemson. Angie Yates / Flickr
IYunivesithi yaseClemson ikhona kwiinqanaba zeentaba zeBlue Ridge ngaseLake Hartwell eSouth Carolina. Iinqununu zezifundo zeyunivesiti zihlukaniswe zaba ziikholeji ezihlukeneyo ezintlanu kunye neKholeji yezoShishino kunye neSayensi yeNtsebenzo kunye neKholeji yoBunjineli kunye neSayensi. Kwiimidlalo, i-Clemson Tigers incintisana kwiCandelo le-NCAA I- Nkomfa ye-Atlantic Coast .
Ubhaliso: 23,406 (18,599 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile yeClemson
College of William & Mary. I-Credit Credit: Amy Jacobson
UWilliam noMary bahlala kwiindawo ezizezona ziphezulu okanye ezikufutshane nakwiiyunivesithi ezincinci zikawonkewonke. Ikholejini ineenkqubo ezihlonelwe kakuhle kwishishini, umthetho, ingxelo, ubudlelwane bamazwe ngamazwe kunye nembali. Eyasungulwa ngo-1693, iKholeji likaWilliam & uMary yinkampani yesibini edala kunayo yonke imfundo ephakamileyo kweli lizwe. I-campus itholakala kwimbali yaseWilliamsburg, eVirginia, kwaye isikolo sasifundisa abaongameli abathathu base-US: uTomas Jefferson, uJohn Tyler noJacob Monroe. Ikholejini ayinayo isahluko se- Phi Beta Kappa , kodwa iqela elihloniphekileyo lavela khona.
Ubhaliso: 8,617 (6,276 i-undergraduate)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili kaWilliam & Mary
Connecticut (UConn, iYunivesithi yaseConnecticut eStrrs)
IYunivesithi yaseConnecticut e-Storrs (UConn) yinkampani yelizwe ephakamileyo yokufunda. IYunivesithi yaseMhlaba noLwandle enezikolo ezi-10 ezahlukeneyo kunye neekholeji. Isikhundla se-UConn sithintele kakhulu kuphando, kodwa iyunivesithi yanikezwa isahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla ayo kwimfundo ye-undergraduate kwimfundo nobugcisa. Kwi-front yezemidlalo, iyunivesiti iphumelela kwiCandelo le-NCAA I- Conference East enkulu .
Ubhaliso: 27,721 (i-19,324 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UConn
I-Delaware (iYunivesithi yaseDelaware eNewark)
KwiYunivesithi yaseDelaware. Alan Levine / Flickr
IYunivesithi yaseDelaware eNewark yunivesithi enkulu kunazo zonke kwilizwe laseDelaware. Iyunivesiti yenziwe iikholeji ezi-7 ezahlukileyo apho iKholeji yoBugcisa nezoSayensi yona mkhulu. Ikholeji yezobuNjineli be-UD kunye neKholeji yezoRhwebo kunye nezoQoqosho zihlala zihamba kakuhle kwizinga likazwelonke. Kwiimidlalo, iyunivesiti iphumelela kwiCandelo le-NCAA I- Colonial Athletic Association .
Ubhaliso: 23,009 (19.22 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile yeDelaware
Florida (iYunivesithi yaseFlorida eGainesville)
IFlorida inikeza uluhlu oluninzi lweeprogram ze-undergraduate kunye neeprogram, kodwa baye bazenzela igama kwiindawo zangaphambili zengcali ezifana nezoshishino, ubunjineli kunye nezezinzululwazi zempilo. I- campus ye-2,000-acre campus ihlala kwisiqendu se-Phi Beta Kappa sibonga kwiyunivesiti inamandla amaninzi kwi-liberal arts kunye nezesayensi. Amandla okuphanda afumana ubulungu besikolo kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika. IYunivesithi yaseFlorida ilungu leNkomfa yeNtshona Koloni .
Ubhaliso: ama- 52,367 (34,554 aphantsi kootitshala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayli yaseFlorida
IGeorgia (UGA, iYunivesithi yaseGeorgia eAthene)
Isakhiwo seSunivesithi sabaSebenzi beeYunivesithi. UDavid Torcivia / Flickr
Eyasungulwa ngo-1785, u-UGA unomkhethe wokuba yiyunivesithi endala ye-enyuvesi yase-Georgia kwi-Georgia ye-615-acre campus ibonakalisa yonke into esuka kwizakhiwo zembali ukuya kwiindawo eziphakamileyo eziphezulu. Ukuze umfundi ophumelele ofuna ukuziva ngezemfundo ye-liberal yeekholeji, u-UGA inenkqubo ehloniphekileyo ye-Honours ye-2,500 abafundi. Iyunivesithi iphumelela kwiCandelo le-NCAA I-Southeast-Conference Conference.
Ubhaliso: 36,574 (27,951 abafundi bee-graduate)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayli yaseGeorgia
I-Georgia Tech - I-Georgia Institute of Technology
Kutholakala kwi-campus yase-Atlanta e-400-ekreji yase-Atlanta, iGeorge Tech ihlala ibanjwe njengenye yeyunivesithi ephakamileyo yoluntu e-United States. Amandla amakhulu aseGeorgia Tech asezinzululwazi kunye nobunjineli, kwaye isikolo sivame ukubonakala kwizikhundla zezikolo zobunjineli . Iziko ligxininisa kakhulu uphando. Ngaphandle kwezifundo ezinamandla, i-Georgia Tech Yellow Jackets incintisana kwiCandelo le-NCAA ndidibanisa i-athletics njengelungu leNkomfa ye-Atlantic Coast.
Ubhaliso: 26,839 (15,489 abafundi beeprogram)
Kwimivuzo yokwamkeleka, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olwamkelwayo, khangela iphrofayili ye-Georgia Tech
IYunivesithi yase-Illinois Urbana-Champaign, i-UIUC. UChristopher Schmidt / Flickr
I-flagus campus enkulu yeYunivesithi yase-Illinois isebenzisa iidolophu ezimbini ze-Urbana ne-Champaign. I-UIUC ihlala ihamba phakathi kweeyunivesithi eziphezulu nakwizikolo eziphezulu zobunjineli kweli lizwe. I- campus ekhangayo yindlu yabafundi abangaphezulu kwama-42,000 kunye nama-150 ahlukeneyo, kwaye iyaziwa ngokukodwa kwiinkqubo zobunjineli kunye nezenzululwazi. I-Illinois inomthala weyunivesiti enkulu e-United States ngaphandle kwe-Ivy League. Ngaphandle kwezifundo ezinamandla, i-UIUC ilungu leNkomfa Enkulu yeGhumi kunye neenkalo ze-varsity ezingama-19.
Kwimivuzo yokwamkeleka, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olwamkelwayo , jonga iphrofayili ye-UIUC
Iimviwo zeSampula e-Indiana University eBloomington. lynn Dombrowski / Flickr
IYunivesithi yase-Indiana eBloomington yi-campus ye-flagus yase-Indiana yenkqubo yeyunivesithi yaseburhulumenteni. Isikolo siye safumana ama-accolades amaninzi kwiiprogram zayo zezifundo, iziseko zayo zeekhompyutha, kunye nobuhle be-campus yayo. I-campus ye-2,000-acre ichazwa izakhiwo zayo ezakhiwe kwi-limestone yendawo kunye neentlobo zayo ezibanzi zeziqhamo kunye nemithi. Kwi-front front, i-Indiana Hoosiers incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference.
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili yase-Indiana University
KwiYunivesithi yaseJames Madison. U-Alma mater / Wikimedia Commons
IYunivesithi yaseJames Madison, i-JMU, inikeza iinkqubo ezingama-68 ze-grade-grade degree. I-JMU inokugcinwa okuphezulu kunye nezinga lokugqiba iziqu ngokuthelekiswa neyunivesithi zikarhulumente ezifanayo, kwaye isikolo sisoloko sihamba kakuhle kwizinga lezizwe zaso zimbini kunye nekhwalithi yezemfundo. I-campus ekhangayo eHarrisonburg, eVirginia, ifaka i-quad evulekile, ilitye, kunye no-Edith J. Carrier Arboretum. Amaqela ezemidlalo ancintisana kwiCandelo le-NCAA I-Colonial Athletic Association.
Ubhaliso: 21,270 (i-19,548 abaphumelele phantsi)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayili yakwaJames Madison
Maryland (iYunivesithi yaseMargan e-College Park)
IYunivesithi yaseManchester McKeldin Library. UDaniel Borman / Flickr
Kutho nje kumntla weWashington, DC, iYunivesithi yaseMaldan ihamba lula kuMetro kwaye isikolo sinokubanxulumana nophando oluninzi kunye norhulumente wephondo. I-UMD inesiseko esiqinileyo samaGrikhi, kwaye malunga ne-10% yezithuba ezingaphantsi kwezobuncwane zivela kwiindawo eziphathekayo. Amandla aseMaldinha kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi ayifumana isahluko sePhi Beta Kappa, kwaye iinkqubo zayo zophando ezinamandla zathola ubulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi. Amaqela eemidlalo eMarikana aphumelela kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili yaseMaldin
UMichigan (IYunivesithi yaseMichigan e-Ann Arbor)
Efumaneka ku-Ann Arbor Michigan, iYunivesithi yaseMichigan ihlala ihamba njengenye yeziko ezikarhulumente ezilungileyo kweli lizwe. IYunivesithi inomzimba wabafundi abanamakhono athile-abafundi abayi-25% abavunyelwe ukuba babe ne-4.0 ye-GPA esikolweni esiphakeme. Isikolo sinokuziqhayisa ngeenkqubo zemidlalo ezivelele njengelungu leNkomfa Enkulu Yezigidi. Ngama-40,000 abafundi kunye ne-200-grade-grade-classers, iYunivesithi yaseMichigan inamandla kwiindawo ezahlukeneyo zemfundo. UMichigan wenza uluhlu lwam izikolo eziphezulu zobunjineli kunye nezikolo zoshishino eziphezulu .
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile yaseMichigan
Minnesota (iYunivesithi yaseMinnesota, iTwin Cities)
I-Pillsbury Hall kwiYunivesithi yaseMinnesota. Michael Hicks / Flickr
I-campus ihlala kumabhanki asempuma nasentshonalanga yoMlambo waseMississippi eMinapolis, kwaye iinkqubo zezolimo ziseSt. Paul campus. U-M uneenkqubo ezininzi ezizimeleyo zemfundo, ingakumbi kwizoqoqosho, i-sayensi kunye nobunjineli. Ubugcisa bobukhulu kunye nezesayensi bezuze isahluko sePhi Beta Kappa. Uphando oluvelele, iyunivesithi yazuza ubulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi. Uninzi lwabadlali bamaMicrosoft abaphumelele kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference.
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, yabona iphrofayili yaseMinnesota
North Carolina (iYunivesithi yaseNorth Carolina eChapel Hill)
IYunivesithi yaseNorth Carolina Chapel Hill. Allen Grove
I-UNC Chapel Hill enye yezinto ezibizwa ngokuba yi "Public Ivy" izikolo. Ihlala ihlala kwiintlanu eziphezulu kwiiyunivesithi zikawonkewonke, kwaye iindleko zayo zizonke ziphantsi kwezona zikolo eziphezulu. Izikolo zeChapel Hill zamachiza, umthetho, kunye nezo shishino zonke zihlonishwa kakhulu, kwaye iSikole Soshishino seKenan-Flagler senza uluhlu lwam lwezikolo eziphambili zezolimo . I-campus enhle neyimbali yunivesithi yavulwa ngo-1795. I-UNC Chapel Hill nayo ibonisa i-athletics egqibeleleyo - i-Tar Heels incintiswano kwiCandelo le-NCAA I-Conference ye-Atlantic Coast. Hlola i-campus kule khenketho yesithombe se-Chapel Hill .
Ubhaliso: 29,468 (i-18,522 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili ye - UNC Chapel Hill
IYunivesithi yase-Ohio State (OSU) yenye yeyunivesiti enkulu kunazo zonke e-US (idlulileyo kuphela yiYunivesithi yaseCentral Florida nase-Texas A & M). Eyasungulwa ngowe-1870, i-OSU ihlala ihamba phakathi kwee-universities ezingama-20 eziphakamileyo kweli lizwe. Unesikolo esinamandla soshishino nomthetho, kwaye isebe layo lezesayensi yezopolitiko lihlonishwa kakhulu. Isikolo sinokuziqhayisa ngekampus ekhangayo . I-OSU yeBuckey iyancintisana kwiCandelo le-NCAA I-Idibano eninzi ye-10.
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayli yase - Ohio State
Penn State kwiYunivesithi Park
I-Penn State kwiYunivesithi yePark Park yi-campus ye-flagus yee-campus ezingama-24 ezenza inkqubo yeyunivesiti yaseburhulumenteni ePennsylvania. Iikholeji ezizodwa ezi-13 ze-Penn State kunye nama-jors angama-160 anikezela ubutyebi bezemfundo zabafundi abaneenjongo ezahlukeneyo. Iiprogram zezifundo zobunjineli kunye nezoshishino ziphawulekayo, kwaye amandla amakhulu ngokubanzi kwezobugcisa kunye nezesayensi zanqoba isikolo isahluko sePhi Beta Kappa. Njengazinye izikolo eziliqela kuloluhlu, iPenn State iyaqhubela kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference.
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olumkelwayo, khangela iphrofayili yasePennsylvania
IPitt (iYunivesithi yasePittsburgh)
IYunivesithi yasePittsburgh Cathedral of Learning. gam9551 / Flickr
Ikhampasi ye-132-ekre yaseYunivesithi yasePittsburgh iqondwa kalula yiCathhedral of Learning, isakhiwo semfundo esona sikhulu kunazo zonke e-US Kwi-front academic, uPitt unamandla amaninzi aquka uFilophu, iMicrosoft, Ubunjineli kunye neBusiness. Njengezikolo ezininzi kuloluhlu, uPitt unesahluko se-Phi Beta Kappa, i-Honor Society Society ehloniphekileyo, kwaye amandla ayo ophando ayifumene ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika. Amaqela ezemidlalo athathwe kwiCandelo le-NCAA I-Conference East enkulu.
Ubhaliso: 28,664 (19,123 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admission, bona iprofayile yePitt
IYunivesithi yePurus. linademartinez / Flickr
IYunivesithi yePurty eWest Lafayette, e-Indiana, iyona nkampani enkulu ye-Purdue University System e-Indiana. Njengekhaya labafundi abangaphezulu kwama-40,000, i-campus yidolophu ngokwayo leyo inikela ngeenkqubo ezingaphezulu kwama-200 zezifundo zakudala. I-Purdue inesahluko se-Phi Beta Kappa, i-Honor Society, kwaye iiprogram zayo zophando zifumene ubulungu kuMbutho weeYunivesithi zaseMelika. I-Purdue Boilermakers ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference.
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iProfayili yePopu
IYunivesithi yaseRuthgers eNew Brunswick
Ibhola leYunivesithi yaseRuthgers. Ted Kerwin / Flickr
Efumaneka eNew Jersey phakathi kweNew York City kunye neFiladelphia, uRuthgers unikela abafundi bayo ukufikelela ngokulula kokufikelela kwizikolo ezimbini ezinkulu. I-Rutgers yikhaya kwizikolo ezili-17 ezinika iziqinisekiso kunye namaziko angaphezulu kwama-175. Abafundi abanamandla nabakhuthazayo kufuneka bahlole iKholeji ye-Honors yesikolo. I-Rutgers Scarlet Knights incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Big Ten Conference
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayili ye-Rutgers
I-Texas (iYunivesithi yaseTexas eAustin)
IYunivesithi yaseTexas eAustin. Amy Jacobson
I-Academically, UT. Austin uhlala nje njengeyunivesithi ephakamileyo yoluntu e-US, kwaye iMcCombs School of Business yomelele ngakumbi. Ezinye izixhobo ziquka imfundo, ubunjineli kunye nomthetho. Uphando olomeleleyo lwalufumana ubulungu beYunivesithi yaseTexas kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi, kwaye iinkqubo zayo ezibugcisa kwi-liberal arts kunye nezesayensi zenza isikolo isahluko sePhi Beta Kappa. Kwiimidlalo, i-Texas Longhorns incintisana kwiCandelo le-NCAA I-nkquthela enkulu ye-12.
Ubhaliso: 51,331 (40,168 abadlulileyo)
Kwimivuzo yokwamkelwa, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili yase UT. Austin
I-Texas A & M kwiSikole seKholeji
I-Texas A & M Isakhiwo seZakhono kwi-campus esemfutshane kwiKholeji yaseKholeji. Denise Mattox / Flickr / CC BY-ND 2.0
I-Texas A & M ingaphezulu kwekholeji yezolimo kunye nezobugcisa kule mihla. Yiyunivesiti enkulu, ebanzi, apho ishishini, ubuntu, ubunjineli, isayensi yoluntu kunye nezesayensi zithandwa kakhulu ngabagqwesileyo. I-Texas A & M yiKholeji yaseMatriki ephezulu kunye nebonakalayo yempi kwi-campus. Kwiimidlalo, i-Texas A & M Aggies bancintisana kwiCandelo le-NCAA I-12 enkulu kwiNgqungquthela.
Ubhaliso: 65,632 (i-50,735 zee-graduate)
Kwimivuzo yokwamkeleka, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olwamkelwayo, jonga iprojekthi yaseTexas A & M
UC Berkeley - Yunivesithi yaseCalifornia eBerkeley
IYunivesithi yaseCalifornia Berkeley. Charlie Nguyen / Flickr
UBerkeley, ilungu leYunivesithi yaseCalifornia , ihamba ngokulinganayo njengeyunivesithi ephakamileyo yoluntu kweli lizwe. Inika abafundi i- campus ehamba phambili kunye nehle kwiSan Francisco Bay, kwaye likhaya kwiklasi yobunjineli bezona zikolo nakwizikolo eziphezulu . Eyaziwa ngokuba ngumntu onobubele kunye nobambeleli, uBerkeley unikezela abafundi bayo abaneendawo eziphathekayo kunye noluntu oluzinzileyo. Kwiimidlalo, iBerkeley ikhuphisana kwiCandelo le-NCAA I- Pacific 10 kwiNgqungquthela .
Ubhaliso: 40,154 (29,310 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UC Berkeley
UC Davis (iYunivesithi yaseCalifornia eDavis)
UC Davis yoBugcisa iZiko. TEDxUCDavis / Flickr
Njengamanyunivesithi karhulumente aphezulu aphezulu, iYunivesithi yaseCalifornia e-Davis inesahluko sePhi Beta Kappa ngenxa yamandla ayo kwi-liberal ubugcisa kunye nezesayensi, kwaye ilungu loMbutho weeNyuvesi zaseMerika ngenxa yamandla alo ophando. I-campus ye-5,300-ekre eklasini ye-Sacramento, iyona inkulu kakhulu kwi-UC inkqubo. UC Davis unikezela abangaphezu kwe-100 abafundela iidanga. I-UC Davis Aggies ukuncintisana kwiCandelo le-NCAA I-Confused Big West.
Ubhaliso: 36,460 (29,379 izifundo eziphantsi)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UC Davis
UC Irvine (IYunivesithi yaseCalifornia e-Irvine)
IHolo likaFrederick Reins eUC Irvine. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
IYunivesithi yaseCalifornia e-Irvine ifumaneke entliziyweni yase-Orange County. I -campus ekhangayo ye-1,500-ekre ine-design yetyhulasekisi enomdla kunye ne-Aldrich Park ephakathi. Ipaki ibonisa inethwekhi yeendlela ezihamba ngegadi kunye nemithi. Njengazinye iinqununu eziphezulu zeYunivesithi yaseCalifornia, uDavis unesahluko sePhi Beta Kappa kunye nobulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi. I-UC Irvine Anteaters ukuncintisana kwiCandelo le-NCAA I-Confest Big Big.
Ubhaliso: 32,754 (27,331 izifundo zakudala)
Kwimivuzo yokwamkeleka, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olwamkelwayo, khangela iphrofayli ye-UC Irvine
UCLA - Yunivesithi yaseCalifornia eLos Angeles
URoyce Hall eUCLA. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Ifumaneka kwi- campus ekhangayo ye-419 ekre eLos Angeles, eWestwood Village, malunga neekhilomitha ezili-8 ukusuka kwi-Pacific Ocean, u-UCLA uhleli kwisiqwenga se-estate. Ngamaziko angaphezulu kwama-4 000 okufundisa kunye nabafundi abayi-30,000 abafundele iidyuli, iyunivesiti inikeza indawo ephakamileyo yokufunda. I-UCLA inxalenye yenkqubo yeYunivesithi yaseCalifornia kwaye imele njengenye yezikolo zikarhulumente eziphambili kwilizwe.
Ubhaliso: 43,548 (30,873 abafundi bezatifikethi)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UCLA
UCSD - Yunivesithi yaseCalifornia eSan Diego
I-Geisel Library kwi-UCSD. I-Credit Credit: UMarisa uBenjamin
Omnye "wee-Ivies zikaRhulumente" kunye nelungu le-Yunivesithi yaseCalifornia, i-UCSD ihlala ihlala kwiiyunivesithi eziphakamileyo ezilishumi ezikarhulumente kunye nezikolo zobunjineli . Isikolo sinamandla ngakumbi kwizenzululwazi, kwizenzululwazi zentlalo kunye nobunjineli. Ngenkampu yayo yonxweme eLa Jolla, eCalifornia, kunye neStpps Institute of Oceanography, u-UCSD ufumana amanqaku aphezulu e-oceanography kunye ne-biological sciences. Isikolo sinenkqubo yeesithandathu zee-grade-class degree zokuhlala ezilandelelweyo emva kwe-Oxford kunye neCambridge, kwaye nganye ikholeji ineengqwalaselo zekharityhulam.
Ubhaliso: 34,979 (28,127 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UCSD
UC Santa Barbara (iYunivesithi yaseCalifornia eSanta Barbara)
UCSB, iYunivesithi yaseCalifornia Santa Barbara. Carl Jantzen / Flickr
I-UCSB inegunya elinamandla kwizenzululwazi, kwizenzululwazi zentlalo, kuluntu kunye nobunjineli abaye bafumana ubulungu kwi-Association of American Universities kunye nesahluko sePhi Beta Kappa. I - campus eyi-1-acre campus ikwabafundi abaninzi, kuba indawo yeyunivesithi yafumana indawo phakathi kweekholeji ezifanelekileyo zokuthandwa kwebala elwandle . I-UCSB i-Gauchos incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Confest Big Big.
Ukubhalisa: 24,346 (21,574 izifundo eziphantsi)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayile ye-UCSB
IVirginia (iYunivesithi yaseVirginia eCharlottesville)
Ukusekwa kwiminyaka engama-200 edlulileyo nguTomas Jefferson, iYunivesithi yaseVirginia inenye yezona nkampu ezintle kunye nezembali e-US Esi sikolo sihlala siqonga phakathi kweeyunivesithi eziphakamileyo zoluntu, kwaye kunye nesibonelelo esingaphezulu kwe-5 billion zebhiliyoni yiyona nto ibaluleke kunazo zonke zikarhulumente izikolo. I-UVA inxalenye yeNgqungquthela yeNxweme yase-Atlantic kunye namacandelo amaninzi amaqela ICandelo I. E-Charlottesville, eVirginia, iyunivesiti isekufuyeni kweJefferson ekhaya eMonticello. Isikolo sinamandla kwiinkalo ezahlukeneyo zemfundo ezivela ebantwini ukuya kubunjineli, kwaye iSikolo samaShishini saseMcIntire senza uludwe lwam lwezikolo eziphambili zezolimo .
Ubhaliso: 23,898 (i-16,331 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayili ye-UVA
Virginia Tech e Blacksburg
ICampbell Hall eVirginia Tech. I-Credit Credit: Allen Grove
Eyasungulwa ngo-1872 njengeziko lezempi, iVirginia Tech isoloko igcina iinqununu zama-cadets kwaye ikwahlulelwa njengekholeji yempi ephezulu. Iiprogram zobunjineli baseVirginia Tech zibeka phezulu kwi-10 ephakamileyo kwiiyunivesithi zikawonkewonke, kwaye iyunivesiti nayo ifumana amanqaku aphezulu kwiinkqubo zayo zoshishino kunye neenkqubo zokwakha. Amandla kwezobugcisa be-liberal kunye nezesayensi azuze isikolo isahluko sePhi Beta Kappa, kwaye abafundi abaninzi bakhonywa kwi -architecture yezakhiwo zamatye . I-Virginia Tech Hokies incintisana kwiCandelo le-NCAA I-Nkomfa ye-Atlantic Coast.
Ubhaliso: 33,170 (25,791 izifundo zakudala)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iphrofayili yaseVinster Tech
Washington (iYunivesithi yaseWashington e Seattle)
IYunivesithi yaseWashington. Joe Mabel / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
I-campus ekhangayo yaseYunivesithi ibheka kwi-Portage ne-Union Bays kwicala elinye kunye neNtaba uRainer kwenye. Abafundi abangaphezu kwama-40,000, iWashington yiyunivesithi enkulu kakhulu eNxweme laseNtshona. UWashington wathola ubulungu kuMbutho weeMerika zaseYunivesithi ngenxa yamandla ayo ophando, kwaye njengamanyunivesithi abolu luhlu, wanikezwa isahluko se-Phi Beta Kappa kwizobugcisa obunamandla obukhulu kunye nezesayensi. Amaqela ezemidlalo athathwe kwi-NCAA Division I Pac 10 nkomfa.
Ubhaliso: 40,218 (28,570 abafundi abagqwesileyo)
Kwimivuzo yokwamkeleka, amanqaku okuvavanya kunye nolunye ulwazi olwamkelwayo, khangela iphrofayli yaseWashington
Yunivesithi yaseWisconsin Madison. URichard Hurd / Flickr
IYunivesithi yaseWisconsin eMadison yi-campus campus ye-yunivesithi yaseWisconsin. I-campus yangaphambili yamanzi ihlala kwiihektare ezili-900 phakathi kweLake Mendota kunye neLake Monona. I-Wisconsin inesahluko se- Phi Beta Kappa , kwaye ihlonishwa kakhulu ngophando oluqhutyelwe kumaziko alo phando malunga nama-100. Isikolo kaninzi siyazifumana siphezulu kwizintlu zezikolo eziphezulu. Kwiimidlalo, amaninzi eekomiti zeWisconsin Badger zikhuphisana kwiCandelo le-NCAA le-1-A njengelungu leNkomfa Elikhulu.
Ubhaliso: 42,482 (30,958 abafundi bezithuba eziphantsi)
Ukwenyuka kwamaxabiso, amanqaku okuvavanya kunye nolunye uxwebhu lwe-admissions, bona iprofayli yaseWisconsin
UHenry Ford kunye ne-Auto Assembly Line
Izilwanyana ezili-10 eziqhelekileyo eziLwandle
Ukungeniswa kuka-Edison weGrafograph
I-Arbor Pocket Rocket Mini-Longboard / I-Skateboard Review
Umdlalo weZihlalo zobukhosi: Iingcaphuno eziphambili kwi-Lord Varys
Udliwano-ndlebe: I-Hayden Panettiere Ixoxa "Izindleko zoMdlalo"
Ukuthenga i-Sailboat-Sloop vs Ketch
Tawhid: Imigaqo yamaSulumane yoBunye bukaThixo